Home News Ururadda Bulshadda Rayidka ee Puntland oo RW Kheyre iyo Farmaajo uga digay...
Ururadda Bulshadda Rayidka ee Puntland oo RW Kheyre iyo Farmaajo uga digay in ay dagaal sokeeye ka abuuraan Puntland
Ururadda Bulshadda Rayidka ee Puntland oo saakay shir deg deg ah ku yeeshay magaalada Garowe ayaa ugu baaqay hogaanka dowladda Fedaraalka in ay ka waantoobaan in ay lacag ku bixiyaan in dagaal sokooeye oo ka dhaco degaanka Puntland.
Si dowladda Fedaraalka uga hortagto shirka Dowlad Goboleedyadda lagu wado in uu ka furmo magaalada Garowe ayaa waxa xafiiska RW Kheyre laga soo abaabulay barnaamij lagu carqaladeynayo qabsoomida shirkaas. Waxa lacag loo soo diray qaar ka mida ciidamada Puntland iyo siyaasiyiin kuwaas oo bilaabay in ay ka abaabulaan dagaal ka dhaca magaalada Garowe si shirka dowlad goboleedyadu u baaqdo.
RW Kheyre ayaa waxa uu howl galiyay gaar mida siyaasiyiinta ka soojeeda beesha Ciise Maxamuud ee ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo uu hogaaminayo xildhibaan Cali Hoosh.
Qaar ka mida ciidanka oo lacag xamar looga soo diray ayaa isku dayay in ay la wareegaan Xarunta madaxtooyadda iyo garoonka diyaaradaha si shirku u baaqdo. Laakiin RW Kheyre iyo Farmaajo labadaba waa ay ku fashilmaeen qorshahooda.
Ururuda Bulshada Rayidka oo ka wal-walsan talaabada ay qaaday dowladda Fedaraalka ayaa ku tilmaamay talaabada Dowlada Farmaajo mid la doonayo in dagaalka sokeeyo laga dhex huriyo dadka reer Puntland. Uruka PUNSA ayaa sheegay in dowlada Fedaraalk ay isku dirtay shacabka Puntland oo horay si buuxda u taageersanaa isla markaana ay lumisay kalsoonidii reer Puntland.
Previous articleMaxkamadda Ciimadamada Qalabka Sida Oo Xukuno Kala Duwan Riday
Next articleSenator Faroole: “Siyaasadda Cabdiwali waad ku qilaafi kartaan laakiin in dowladnimada Puntland la burburiyo cidna kama yeelayno”
Dagaal Beeled Ka Dhacay Duleedka Dagmada Deyniile
Wasiirka Amniga iyo Dhamaan Hey’addaha ka shaqeeya Amniga oo lafaray in...